» ‘तामाङ र लामा फरक कुरा हुन्, ग्याल्बो र सोनाम ल्होछारमा फरक छ–देवेन्द्र लामा
‘तामाङ र लामा फरक कुरा हुन्, ग्याल्बो र सोनाम ल्होछारमा फरक छ–देवेन्द्र लामा
हेटौँडा, ६ माघ । तामाङ समुदायको महान साँस्कृतिक पर्व २८५५ फाग ल्हो बँदेल बर्ग सोनाम ल्होछार यही माघ २२ गते नेपाल सहित विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा मनाईदै छ । सोही दिनको अवसर पारेर सो दिनभन्दा अघि र पछि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने तय भईसकेको छ । नेपालमा विशेष गरी तामाङहरुले पनि लामा लेख्ने चलन चलेको छ अनि तामाङ समुदायभित्रै पनि सोनाम र ग्याल्बो ल्होछार मनाउने छुट्टा–छुट्टै तामाङहरु छन् । वास्तवमा लामा र तामाङमा के फरक छ ? अनि ग्याल्बो ल्होछार र सोनाम ल्होछारमा के समानता र असमानताहरु छन् ? यसै विषयमा मकवानपुरका चर्चित तामाङ लेखक, तामाङविज्ञ र ईतिहासका खोजकर्ता देवेन्द्र लामासँग हाम्रा संवाददाता सन्देश थिङले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश–
१.ल्होछार वा ल्होसार भनेको के हो ?
–सामान्य अर्थमा ल्होछार (ल्होसार) भनेको बुद्धिष्टहरुको नयाँ बर्ष हो । तामाङ भाषामा ‘ल्हो’ भनेको ‘वर्ष’ र ‘छार’ भनेको ‘नयाँ’ हो । त्यसैले यो बुद्धिष्टहरुको नयाँ वर्ष नै हो ।
२. ल्होछार धर्म हो कि सँस्कृति हो ?
–ल्होछार धर्म होइन सँस्कृति हो । किनभने धेरै समय अगाडि देखि नै अन्नबाली फलेर बाली भित्राईसकेपछि विभिन्न किसिमका साँस्कृति कार्यक्रम गर्दै एकअर्कामा खुशी साटासाट गरी ल्होछार मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको ईतिहासमा देखिन्छ । त्यसैले यो धर्म नभई सँस्कृति हो र यो साँस्कृतिक पर्व हो ।
३. ल्होछार क–कसले मनाउँछन् ?
–विषेशगरी ल्होसार तिब्बतीहरु ,कोरियनहरु र अन्य देशहरुमा पनि मनाइन्छ । त्यस्तै नेपालमा चाहिँ तामाङ, गुरुङ, शेर्पालगयतका जाति र बौद्धधर्मालम्वीहरुले मनाउने गर्छन् ।
४. ल्होछार कसरी मनाईन्छ ?
–ल्होछारमा प्रतिपदाको दिनमा सबैभन्दा सुरुमा घरहरु साफा सुग्घर गर्ने र नुहाईधुवाई गरेर लामाहरुबाट पुजापाठ गराईन्छ । पुजापाठ गरेर लुङ्दर राखीसकेपछि औँशीको तिथिमा राति ११ बजे ल्हो फालेर विभिन्न परिकारहरु बनाइन्छ । जस्तै ः पञ्चाअमृत अर्थात दुच्छे, खम्सी, गथुम्बा, छेमार लाखङहरु बनाएर मनाइन्छ । बिहानै लामा गुरुले ला म्हेन्दो (टटेलाको फुल) को टिका लगाउँदै आर्शिवाद दिनुहुन्छ । अनि आफूभन्दा ठूला मान्छे सबैलाई ढोगेर आर्शिवाद लिइन्छ । ल्होछारमा बिषेश गरी नयाँ नयाँ कार्यहरु बारे सोच्ने, कहिले नभेटेको आफन्तहरु भेट्ने घुम्ने अनि बिभिन्न साँस्कृति कार्यक्रम गरेर भावानत्मक रुपमा मिलेर मनाइन्छ ।
५. ल्होछार किन मनाईन्छ ? यसको के फाईदा छ ?
–आ–आफ्नो जातिको पहिचानको लागि ल्होछार मनाइन्छ र अहिले चलिरहेको परम्परा सँस्कृतिमध्ये ल्होछार विश्वको सवैभन्द पुरानो र पहिलो परम्परा र सँस्कृति पनि हो । वास्तवमा यस परम्पराबाट अरु परम्पराको समेत सुरु भएको छ ।
६. ल्होछारप्रति सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? सरकारबाट सहयोग वा असहयोग कस्तो अवस्था छ ?
–ल्होछारप्रति सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । किनभने हिन्दु धर्मालम्वीहरुको दशैँ तिहारमा कयौँ दिन सरकारी बिदा दिईएता पनि त्यसैगरी सरकारले ल्होछारमा बिदा दिएको छैन । एक वर्षमा एकपटक भएको ल्होछार बिदालाई समेत सरकारले हटाईदिएको छ । यद्यपि सरकारले यस निर्णयलाई केही सच्याएको भने छ । यसबाट सरकारले देशमा धार्मिक सहिष्णुता र धर्म निरपेक्ष भनेर संविधानमा लेखेपनि विशेष जातिको पर्वलाई मात्र प्रशय दिएर सबै वराबर भन्ने भ्रम मात्रै छरेको छ । सरकारले पञ्चायति राज्यकालको जस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको छ । यस विषयमा सरकारलाई सधैँ खबरदारी गरिरहन आवश्यक छ ।
७. ल्होछार जस्ता चाडपर्वलाई लिएर अहिले कस्तो अवस्था छ ? कस्ता उदेश्यहरु लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ?
–प्रजातन्त्र आउनु भन्दा अगाडि धेरै बाधा अड्चनहरु थिए तर अहिले त्यस्तो अवस्था प्रत्यक्ष रुपमा छैन । तरपनि सरकारले सबैलाई समानरुपमा हेरेको देखिँदैन । ल्होछारलाई धेरै खर्च गरेर तडकभडक गरेर मनाउनु हँुदैन । अफूसँग जति छ त्यतिमा नै खुशी भएर भावनात्मक रुपमा मनाउनुपर्छ । पर्व भनेको खर्चबाट भन्दा नि भावनात्मक रुपमा मनाउनुपर्छ ।
८. यसपालीको ल्होछारमा के कस्ता योजनाहरु छन् ?
–यसवर्ष ल्होछार ठाउँ ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर मनाईदै छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ रातोमाटेमा ल्होछार मेला हुँदैछ । त्यस्तै बुढीचौर ,मनहरी, हेटौँडा लगायतका क्षेत्रमा ल्होछार साँझ, साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा विभिन्न स्थानहरुमा पनि छुट्टाछुट्टै कार्यहरुको आयोजना गरिँदैछ ।
९. केही तामाङहरुले आफ्नो थरमा ‘लामा’ लेख्ने गर्छन् । के लामा र तामाङ एउटै हो ? किन तामाङहरुले लामा लेख्न थाले ?
–‘तामाङ’ एउटा जात हो भने ‘लामा’ पद हो । तामाङ भित्र विभिन्न थरहरु हुन्छन् त्यही थर भित्र आफ्नो आफ्नो वंश पनि छ । यस अर्थमा पनि लामा र तामाङ भनेको एउटै होईन । लामा भनेको धर्मको विद्वान हो । धर्मसम्वन्धी धेरै पढेर , अध्ययन गरेर ज्ञान प्राप्त गरेको ब्यक्ति नै लामा हो । पहिले पहिले तामाङ जातिलाई राज्यले घृण गर्ने भएकाले लामा लेख्न थालिएको ईतिहासमा पाईन्छ ।
१०. तामाङ समुदायभित्रै पनि सोनाम र ग्याल्बो ल्होछार दुबैलाई मनाउने समुदाय छन् । ग्याल्बो ल्होछार र सोनाम ल्होछारमा के फरक छ ?
–सोनाम ल्होछार २८५५ औँ र ग्याल्बो ल्होछार २१४६ औँ भयो । सोनाम भन्दा ७ सय बर्ष पछाडि मात्र ग्याल्बो आएको हो । अनि पछि अरु अरु पात्रोहरु आएका हुन् । सोनाम ल्होछार विश्वमा पुरानो सँस्कृति हो भने लगभग १५–२० ओटा देशमा मनाइन्छ । चीन , कोरिया लगयत देशहरुमा सोनाम ल्होछारकै दिनमा नयाँ बर्ष सुरु हुने गर्छन् ।
११. समय र संवादका लागि धन्यवाद ।
–हजुरहरुलाई पनि धन्यवाद ।